Headline Nepal | सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै तीव्र रुपमा फेक सम्बन्धको विस्तार
पछिल्लो समय निरन्तर रुपमा अपराधका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।पछिल्लो समय अपराधको घटना बढ्नुको महत्वपूर्ण अंग सामाजिक सञ्जाललाई लिदा फरक नपर्ला । सामाजिक सञ्जाल भौगोलिक रूपमा जतिसुकै टाढाबाट पनि एक अर्कासँग सजिलै जोडिने माध्यम बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार होस् वा व्यक्तिगत खबर, सामाजिक सञ्जालमार्फत छिनभरमा फैलिन्छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालबाट नराम्रो घटनाहरु पनि बढेको देखिन्छ । तर, यदि अपराधको सुरुवात सामाजिक सञ्जालबाट नै हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्ग र टिकटकका मालिक चाङ यिमिङ्गले सायद यस्को आविश्कार गर्दैन थिए होला । हुन त सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गर्ने, कुन समयमा प्रयोग गर्ने भन्ने त व्यक्ति विशेषमा भर पर्छ । अहिलेको परिवेशलाई हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालसँग नजोडिएका मान्छे भेटाउन मुस्किल छ । जसरी सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका मान्छे भेटाउन गाह्रो छ, त्यस्तै अपराधसँग नजोडिएका व्यक्ति भेटाउन पनि मुस्किल भएको छ ।आज भोलि जतिपनि घटनाहरु घटिरहेका छन् प्राय ति सबै घटनाहरु सामाजिक सञ्जालसँग नै जोडिएका छन् ।
अपराधका घटनामात्र नभइ आजभोलि कतिपय हत्या सम्बन्धी घटनाहरु पनि सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । विगत केहि वर्षदेखि यताका घटनाहरुलाई नियालेर हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालका कारण युवापुस्ताको तुलनामा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका फस्ने गरेका छन् । आजभोलिका प्राय बालबालिकालाई २४ घण्टाको समयमा तिमी के गछौं भनेर प्रश्न गर्ने हो भने उनीहरुको मुखबाट यो उत्तर आउँछ केही समय पढाइ बाँकी समय सामाजिक सञ्जाल अर्थात टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम साथै अन्य के-के हो के-के ।
हुन त सामाजिक सञ्जालको आविश्कार भएको धेरै समय त भएको छैन तर पनि प्रयोग भने चरम पुगिसकेको छ । सन् २००४ सालमा स्थापना भएको फेसबुकले ४ वर्षको बच्चालाई समेत आफ्नो बनाइ सकेको छ । सरकारले फेसबुकको प्रयोग गर्नका लागि १३ वर्षको उमेर तोकेको भएपनि उक्त नियम लागु हुन सकेको छैन ।
टिकटक त भर्खर २०१६ मा आएको थियो तर २०१६ भन्दा पछि जन्मेका बच्चा समेत भाइरल र लाइक शब्दले आफ्नो जिब्रोको शब्दभण्डार भर्न सफल भएका छन् । छोटो समयमै बच्चादेखि वृद्धवृद्धा सम्मको मनमा बस्न सफल फेसबुक टिकटक आर्थिक आयआर्जन गर्ने देखि लिएर कसैको पीडा भुलाउने माध्यम पनि बनेको छ । सामाजिक सञ्जालको यति धेरै सकारात्मक पक्ष हुँदा हुँदै पनि यसको उचित रुपमा प्रयोग गर्न नसक्दा यसले अपराध जस्ता घटनाको तीव्र रुप लिएको छ ।
आजभोलि सामाजिक सञ्जालको पहुँच र उपयोग गर्ने क्षमता भएर पनि प्रयोग नगर्ने मानिस एकलकाँटे जस्तै मानिन्छ । सायद यहिँ भएर पनि हुनसक्छ सामाजिक सञ्जाल प्रति मानिसहरुको क्रेज बढेको । कुनै व्यक्ति किन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दैन ? भन्ने प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । एउटै मानिसले बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म सामाजिक सञ्जालको प्रयोग धेरै पटक गर्छ । फुर्सदको साथी, सूचना र मनोरञ्जनको माध्यम, समाचारको स्रोत, साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने माध्यम आदि बनेको छ, सामाजिक सञ्जाल ।
अब कुरा गरौं सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट बन्ने फेक सम्बन्धका बारेमा । आजभोलि हरेका बालबालिकाहरु कक्षा ५देखि नै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । हसाउँने कुरा त के छ भनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमात्र हैन उनीहरु कुनै न कुनै व्यक्तिसँग जोडिएका हुन्छन् । एकचोटी गम्भीर भएर सोचौ त ७–८ वर्षको बच्चाहरु कुनै न कुनै व्यक्तिसँग जोडिनु के त्यसमा आफ्नो अभिभावकको लापरबाही त हैन ? किन अभिभावकले सानो उमेरमा नै बच्चाहरुलाई मोबाइल फोनको प्रयोग गर्न दिन्छन् । यतिमात्र हैन अझ कतिपय आमा बाबु त भाइरल बनाउने नाममा बच्चाहरुलाई दर्जनौ उपायहरु सिकाउने समेत गरेको पाइन्छ ।
तर कहिले यो सोच्दैनौ कि यस्तो गतिबिधिले बालबालिकाको दिमागमा कस्तो असर पर्छ । अविभावकले यो कहिले बुझेन के हामीले निर्बाध रुपमा मोबाइलको प्रयोग गर्न दिएकै कारण बालबालिकाको उमेरमा नै अपराधको घटनाहरु बढे । आजभोलि बच्चाहरुमा सानैदेखि माया गर्ने अर्थात (लब) गर्ने बानीको विकाश भइसकेको छ । नचिनेको व्यक्तिसँग जोड्निे दैनिक रुपमा कुरा गर्ने साथै केही समय पश्चात नै एकअर्काबीच भेटघाट हुने साथै उनीहरुबीच अनैतिक सम्बन्ध हुने गरेको घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् ।
कतिपय बालबालिका तथा महिलाहरु सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाटै बलाकृतका सिकार बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा जोड्निे र भेट्न गर्न बोलाइ एक युवती,महिला, बालिकालाई सामुहिक रुपमा बलात्कार गरेका कयौं घटनाहरु छन् । जसमध्ये मेरो एउटा साथी जुन मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी हुन् । उनको विगत २ वर्ष अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत एक जनासँग चिनजान भयो । उनीहरुको दैनिक रुपमा कुरा हुन थाल्यो र कुरा भएको २-३ महिनामा नै उनीहरुबीच भेट हुने कुरा भयो । र उनीहरुबीच अन्नत भेट पनि भयो ।
त्यति बेला उनी मात्र १३ वर्षकी थिइ्न भने उनका साथी उनीभन्दा करिब ७- ८ वर्ष नै माथी उमेरका थिए । उनीहरुको त्यो पहिलो भेटपछि उनीहरुबीच बिहे कुरा भयो तर, यो कुरा उनका घरपरिवार कसैमा पनि थाहा थिएन । उनीहरुको बिहे पनि भयो बिहेभएको केही महिनामा नै उनी गर्भवती भइ्न र उनले एक बच्चा पनि जन्माइन् । हाल उनीहरुबीच कुनै सम्बन्ध छैन उनीहरुबीच सम्बन्ध बिच्छेद भइसेको छ ।
उनीबीच विभिन्न कारण देखाउँदै केटा पक्षका परिवारले जबरजस्ती डिर्भोस गराएका छन् ।भने, उनीमा सानै उमेरमा बच्चा जन्माएका कारण आङ खस्नुका साथै स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु देखा परेको छ । साथै उनलाई सानो उमेरमा विवहा गरेका कारण परिवारले पनि खासै सहयोग गरेको पाइदैन । तसर्थ यस्ता घटनाहरु घट्न नदिनका लागि आफ्ना घरपरिवारले विशेष रुपमा ध्यान दिनु आवश्यक छ भने, आफू स्वयमले पनि सहि रुपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
यसैबीच सामाजिक सञ्जाललाई एकअर्काको विरुद्धमा अस्त्र बनाएर प्रयोग गर्ने, बदनाम गर्न खोज्ने, अनावश्यक टिकाटिप्पणीको थलो बनाउन खोज्ने, संगठित साइबर समूह बनाउने, अमर्यादित गालीगलौजमा उत्रिने, अशिष्टता प्रदर्शन गर्ने,जस्ता चित्रहरु आइरहेको छ । तसर्थ सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो निहीत स्वार्थ र मनोरञ्जनको साधन मात्र नबनाएर यसमा खर्च हुने समय उत्पादनशील विषयमा उपयोग गरौं ।